Hlola iSalvador, eBrazil - World Tourism Portal
Hlola iSalvador, eBrazil
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eSalvador, eBrazil.
Ongakwenza eSalvador, eBrazil
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weSalvador
Bukela ividiyo ngeSalvador
Hlola iSalvador inhlokodolobha yesifundazwe saseBahia, Brazil. Nge-Old Town ebukekayo (iWebhu Yamagugu Emhlaba), indawo yomculo enempilo futhi ethandwayo I-Carnival imikhosi, kubhekwa njengenye yezindawo zokuzalwa zesiko laseBrazil.
Isungulwe e-1549, iSalvador yayiyinhloko-dolobha ngesikhathi sokuhweba ngezigqila. Ifa lisalele namuhla ezinkulwini zalo ezinkulu zase-Afro-Brazil, futhi isiko eliphumayo ngezindlela eziningi lidlula lonke iBrazil. Yidolobha elinempilo, elijabulisayo, futhi abantu bakhona banomusa impela.
Idolobhana lingelesithathu ngobukhulu eBrazil, livela amakhilomitha amaningi ezweni kusukela ogwini. Iningi lezivakashi lizihambela ezindaweni ezingasogwini ezihlangana lapho ichibi lihlangana khona nolwandle. ISalvador inesimo sezulu esishisayo esifaka phakathi amahlathi emvula nezimila ezihlanzekile.
Kunezifunda eziningi zasolwandle ezisuka empini yephasi elisenyakatho-mpumalanga ogwini lwe-Atlantic. Umakhelwane weBarra osemaphethelweni wepeninsula uyindawo enkulu yokugxumagxuma esePelourinho, futhi okuya ngasenyakatho-mpumalanga kukhona izindawo ezise-Rio Vermelho nase-Amaralina, ezibonisa impilo yobusuku obungehlosiwe embonini yezokuvakasha yakwamanye amazwe. Ukuhamba ngebhasi okuhle kodwa ngale komakhelwane kungumakhelwane we-Itapuã, onamandla futhi ohlangothini lwasebusuku olunezivakashi zasekhaya nezivakashi ezimbalwa zakwamanye amazwe. Enyakatho ukusuka lapho kunamakhilomitha namakhilomitha emabhishi amahle, wonke afinyeleleka ngebhasi.
Ugu lwe-bayshore enyakatho ngaphesheya kwePelourinho lubala ukuthula okuthe xaxa nokujikeleza endaweni yangakini, kepha okukuncane kakhulu, impilo yasolwandle. Ingaphakathi leSalvador yilapho “idolobha elisha” lithuthuke khona, ligcwele izindawo zokuhlala, izindawo zokuthenga zemigwaqo nemigwaqo emikhulu, konke lokhu kungahlukaniswa ngaphandle kokuba nomngane wokukukhombisa lapho uzungezile.
Abahlali bendawo bayakujabulela ukwabelana ngamakhono abo okudansa angaphandle nomculo nomculo izivakashi. Abahlali babhekwa njengabanye abantu abanobungane kakhulu emhlabeni. Abavakashi bamukelwa ngezandla ezifudumele nangobungani yiningi lezakhamizi zendawo.
Abantu baseSalvador, njengabanye abantu abavela esifundazweni saseBahia, banedumela lokuba nokukhululeka, okulula ukuwenza, nokuthanda abanye, ngisho nezindinganiso zaseBrazil. Ngasohlangothini olubi, lokhu kubuye kuhunyushelwe ngokuthi ubuvila nokwenyanya ukusebenza; ngandlela thile, abantu baseSalvador banedumela elihlukile kubantu abavela São Paulo. Kuyangabazeka ukuthi leli dumela liyiqiniso yini, njengoba ukuziphatha kwabahamba ngezinyawo nabashayeli bezimoto kubonakala sengathi kuyakuphikisana nalokhu.
Kunezindlela eziningi zokuhamba ezitholakala eSalvador, kufaka phakathi amatekisi, amabhasi nokuqashwa kwezimoto. Imali yamabhasi ishibhile impela, yize imali yamatekisi ingabiza impela uma umuntu ehamba ibanga elide.
Uzothola izinto eziningi ezahlukene okufanele uzenze eSalvador. Eminye yemisebenzi edumile ifaka phakathi:
Ukuvakasha kosuku kweSalvador
Izifundo zegalofu zaseSalvador
Imikhosi yomculo waseSalvador
ISalvador, iminyaka engu-500 ngosuku lwe-1 (vakashela iSalvador, emuva ezimpandeni zase-Afrika nezamakoloni zaseBrazil). Ukuvakasha okungokomlando, kuthathwe emikhondweni eshayiwe, ukuthola izindawo ezithakazelisa kakhulu eSalvador, ezixhunyaniswe namasiko angaphezu kweminyaka engu-500, ukuhlangana namaSalvadorians nempilo yabo yansuku zonke. Umhlahlandlela omuhle wokuvakasha waseBrazil eSalvador uzokwazi ukukukhombisa ezindaweni eziningi ezikhangayo nemisebenzi uma ufuna ukuhlola idolobha nendawo ezungezile ephephile neyasendaweni. Inketho enhle yokuthola umbono ojwayelekile futhi uthole indlela yakho edolobheni yi "Salvador Bus", ibhasi lokuvakasha elivulekile elihamba ngamaphuzu aphambili entshisekelo nokunikeza incazelo endleleni.
Kwesinye isixuku kukhona uhambo lokuhamba mahhala olusebenza edolobheni oluqala kusuka eCinema Glauber Rocha esigcawini seCastro Alves
Enye yezinto ezithandwa kakhulu eSalvador yi-carnival. Isiqiwu esikhulu sakwaSalvador, Carnival, esikhulu kunazo zonke emhlabeni, ngokwencwadi yamarekhodi kaGuiness, sithatha isonto elilodwa futhi sithandwa kakhulu ngamaBrazilians kanye nezivakashi ngokufanayo. Siqukethe ama-parades, ukuzijabulisa bukhoma, umculo, abadansi nabathengisi. Izigaba eziphambili zilandela imibuthano emithathu: eyodwa esesikhungweni somlando iPelourinho (enamaqembu amaningi endabuko ngezingubo), eyodwa eCampo Grande, lapho iningi lamaqembu lidlala khona i-samba, futhi eminyakeni yamuva nje yilowo othandwa kakhulu eBrara / Ondina, lapho u-Axé wanamuhla waseBrazil umculo uhlangana ne-percussion nazo zonke izinhlobo zemvumelwano nezitayela, futhi amaqembu aqala phakathi kwamabhokisi athi “Camarote” ngakolunye uhlangothi nolwandle kolunye. Izinketho zokubamba iqhaza kungaba ngokubuka emabhokisini e-camarote, noma ukuthenga ihembe elithi “abadá” ukujoyina iqembu elihambisana nelinye lamaqembu kulo lonke ipharishi. Umuntu angalindela ukuba nobumnandi obuningi uma eholidini eSalvador, Brazil ngesikhathi I-Carnival.
Ukuvakashela ibhishi laseSalvador kuyisici esivelele kubavakashi abaningi. Elinye lamabhishi asemaphakathi eSalvador yiPorto de Barra. Kwakuyindawo yokuqala yokuhlala okokuqala kwabafokazi baseYurophu ukufika eBahia. Kungagcwala kakhulu ngezimpelasonto. Isifunda esisenyakatho-mpumalanga yeSalvador sigxila emabhishi amaningi ngekhwalithi enhle yamanzi. I-Flamengo neStella Maris ngamabhishi athandwa kakhulu phakathi kwabavakashi kanye nabasendaweni ephezulu yendawo. Banengqalasizinda yezivakashi ehamba phambili namanzi anenkungu efanelekile yokushweza emanzini. IJaguaribe, iPiatã ne-Itapoã, enamanzi apholile, imvamisa abantu bakhona futhi bangaba nempelasonto impela ngezimpelasonto. Bayindlela enhle ongafuna ngayo ukuxubana nabantu bendawo, kepha ungalethi lutho ngaphandle kwezingubo zakho, izibuko, isibuko selanga, nemali ethize, ngoba ukuvakasha kwamagalofu kujwayelekile.
Amanye amabhishi aseSalvador awalungele ukugeza, kodwa nokho angakuhle ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile, noma ukuthatha izithombe. UFarol da Barra unombono omuhle (ikakhulukazi ngesikhathi sokushona kwelanga), kepha kunzima ukuhamba ngenxa yamadwala. Igama elithi “Farol” lisho indawo yokukhanyisa izibani, futhi lolu bhishi lwaziwa ngendlu yalo yokukhanyisela futhi lithandwa ngabasubathi basemanzini. Ukukhetha okuphephe kakhulu yiPlakaford eseduze. Lapha amanzi ezolile namabhishi anesihlabathi athambile amukelekile emindenini nasezinganeni. Edolobheni eliseningizimu, kuneqoqo lamabhishi amahle ahlanganisa iTinhare neBoipeba.
Izitolo zaseSalvador ziyipharadesi labazingeli. Ayikho into ongeke uyithole enxanxatheleni yezitolo. Uma uhlela ukuthenga ubuciko obudumile, ubuciko kanye nokugqoka, hlola izitolo ezincane e-Old Town noma ungene eMercado Modelo (iModeli yeModeli). Abantu bendawo bathanda ukuyothenga ezitolo ezinkulu ezitolo zaseMelika.
Ukuthenga i-Ba Bahia (eyayiyi-Iguatemi yangaphambili yokuthenga)
Isikhungo Sokuthenga Lapa
Isikhungo Sokuphuma eBahia
Ukuthenga kweSalvador Norte
Ukuthenga Bela Vista
Into yokuqala ukuthi noma ngubani ofuna ukuyothenga eSalvador kufanele azi ukuthi kubalulekile ukushintshana. Abathengisi abambalwa kakhulu abazonamathela kumanani wabo abanikezwe wona. Uma becindezelwa bayohlala behla njalo. Uma ufuna ubuciko bendawo kufanele uvakashele iPelourhino. Kunemibukiso eminingi ephindwe kabili njengezitolo.
Izindawo zokudlela ze-Bahian zithathwa njengezinye zezinto ezihamba phambili kuzo Brazil. Iningi lezindawo zokudlela ze-Bahia linikeza okudla kwaseNingizimu Melika kepha kukhona okumbalwa okuhlinzeka ngokuthile okukhethekile. ITerreiro de Jesus yindawo enhle yokusampula cuisine wendawo ezitolo zomgwaqo, ezenziwa ngabaseya base-Afro-eBrazil ngezingubo zabo ezimhlophe zesiko. Okufanele uzame isidlo yi-Abara. Lesi isisongelo esinamathiselwe ubhontshisi, i-dende uwoyela no-anyanisi konke kuphekwe emgqonyeni webhanana onezinongo zokunambitha. Uma ukhetha ukudla kwaseNtshonalanga lapho-ke uzothola izindawo eziningi zokudla okusheshayo njengeBurger King, McDonald's, Subway noma iPizza Hut. Futhi uzothola amaketanga wokudla wakusihlwa njenge-Outback Steakhouse.
Qiniseka ukuthi uzama i-acarajé, amafreyimu amancane enziwe ngophizi olunamehlo amnyama no-anyanisi othosiwe emafutheni wesundu afakwe ngeapapá (i-shrimp paste) .Lawo athengiswa yiBaianas emgwaqweni.
Uhambo oluhle losuku, bamba isikebhe esiqhingini sase-Itaparica. ISalvador futhi isango lokuya kwezinye izinto eziningi eziseduzane ezifana:
UPraia do Forte. Ibhishi lolwandle elinendawo ebizwa ngokuthi yi- “Project Tamar” turtle.
Amadolobhana amancane asolwandle eduze kweCosta dos Coqueiros (Coaston Coconut) enamabhishi athule alungele ukusetshenziswa kwezilwandle.
Kumakhilomitha ambalwa nje ukusuka eNyakatho ukusuka ePraia do Forte, leli bhishi ledolobhana elivuselelekayo likhona phakathi kolwandle nomfula ohamba ngokufana nolwandle ngamamitha angamakhulu ambalwa. I-panorama ehlukile.
Isiqhingi esihle futhi esimnandi kakhulu.
Morro de ISao Paulo. Isiqhingi esivame kakhulu izivakashi nabendawo, izindawo zokudlela eziningi, amahostela nemigoqo. Inamabhishi amane anamanzi we-translucent.
Massarandupió. I-90 km nje ukusuka eSalvador, uyipharadesi langempela, ugu lolwandle oluwugwadule, olunomfula omncane. Ukuhamba ngasolwandle ungafinyelela indawo ebhishi yobunqunu. Ama-pousadas amancane kanye nezindawo zokudlela. Amatende amakhulu endaweni enotshani ngemuva kwendunduma.